မှော်ဆရာအချစ် – Grab Love Story
မနေ့က ၀ုန်းကနဲသဲချလိုက်တဲ့မိုးဗျာ အခုထိ တစ်ချက်မှမတိတ်သေးဘူး။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလား ဘာလား မသိဘူး။ အချိန်မှမဟုတ်တာ။ပိတောက်ဝါတွေလဲ မိုးပေါက်ထိမှန်ပြီး “လန့်“ပွင့်ကုန်ကြလေရောသလားပဲ….. ၀ါ ၀ါကိုထိန်လို့ အချိန်မဟုတ်အခါမဟုတ် တပေါင်းလမှပိတောက်ပွင့်တာများအံ့ရော။ အေးလေ ရာသီဥတုနဲ့ပန်းတွေကလဲ အချင်းချင်း အပေးအယူရှိကြတာဆိုတော့ လိုချင်တဲ့အပူချိန်မိုးရေချိန်ရောက်ရင်ပွင့်ကြမှာပဲ။ သစ္စာမရှိဘူး၊ ဘာမရှိဘူးသွားပြောလဲ သူတို့နားလည်မှာမှ မဟုတ်တာ။ ပန်းတွေရာသီမမှန်ဘဲ ပွင့်အောင်၊ အသီးတွေသီးအောင်လူတွေလုပ်ကြတော့……. အင်း…..လူလူချင်းလဲ အချိန်မဟုတ် အခါမဟုတ် ဖူးချိန်တန်ဖူး၊ ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုသလိုမဟုတ်ဘဲ အတင်းပြဲရဲပွင့်ခိုင်းတော့ သွေးတွေ ထွက်ကုန် ရောဆိုတဲ့ ပျက်လုံးတစ်ခု သတိရတယ်။
အမှန်က ရယ်စရာလုပ်ပြီးပြောပေမဲ့ အဲ့ဒီစကားမှန်တယ် ကိုယ့်လူ၊ ပွင့်ချိန်မတန်ဘဲ အတင်းဖြဲပွင့်ခိုင်းခဲ့လို့ ရာဇ၀င်တွင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးကြုံတုန်းပြောလိုက်ချင်သေး။ ပုံပြင်မဟုတ်ဘူးနော် ကျုပ်က လက်တွေ့သမား ခင်ဗျား ပဲခူးလမ်းကုို သွားဘူးလား……….ထောက်ကြံ့အလွန်မှာ“လှည်းကူး“ဆိုတာရှိတယ်။ အဲ့ဒီ လှည်းကူးကနေ အရှေ့ဘက်တောင်ခြေဆီကို တည့်တည့်မတ်မတ်ဘဲ ထောင်တက်သွား“သပြေအိုင်“ဆိုတဲ့ ရွာလေးကို တွေ့လိမ့်မယ်။ သပြေအိုင်ဟာ နွေမှာအညာဆန်ပြီး မိုးမှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရွာလေးလိုပဲ ရေတွေဝိုင်းနေတာ ဆောင်းမှာတော့ ချစ်စရာအကောင်းဆုံးဆောင်းနှင်းမှုံတွေကြားက ပဲခူးရိုးမမှ တောင်တန်းလှိုင်းတွန့်ကြီးတွေကို တွေ့လိမ့်မယ်။
ခင်ဗျားသာ စာပေသမားဆိုရင် အဲ့ဒီရိုးမကြီးကို နောက်ခံထားပြီး စာတွေအများကြီးရေးဖြစ်သွားမှာ ကျိန်းသေပြောရဲတယ်။ လွမ်းစရာကြီးဗျာ။ ကျုပ်ကတော့ ခံစားတတ်တာပဲ ရှိတာ ခင်ဗျားလိုဖတ်လို့ကောင်းအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ စာမျိုးမရေးတတ်ဘူးဗျာ။ ဒါကြောင့်အခုပြောမဲ့ကိစ္စကိုလည်း ဖြည့် ဖြည့်ပြီး နားထောင်ကြဗျာ။ ကျုပ်က အစတည်းက လိပ်ပတ် လည်အောင် စကားပြောတတ်တာမှုတ်ဖူး။ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကတယ်ပြီးနားလည်တာမဟုတ်ဖူး။ ထားပါတော့ “အဲ့ဒီ သပြေအိုင်“ဆိုတဲ့ ရွာလေးထဲကို အခုလို မိုးဦးကျလေးမှာဝင်ကြည့်ရအောင်။ အတားအဆီးမဲ့စွာ တိုက်ခတ်လာသော မုတ်သုန်လေက ဧည့်သည်မိုးကိုတစ်ပါတည်းခေါ်ဆောင်လာ၏။ သည်အချိန် သည်ကာလ လာနေကြမဟုတ်သော မိုးဧည့်သည်ကြောင့် သပြေအိုင်ရွာလေးအတွင်းရှိ ဓနိမိုး၊ ထရံကာ အိမ်လေးများ ၀ရုန်းသုန်းကား ပြေးဟယ် လွှားဟယ် ဖာဟယ် ထေးဟယ် ဖြစ်နေကြသည်။
ရွာက ရွာတန်းရှည်လေးမို့ရွာလယ်လမ်းတစ်လမ်းသာ ထီးထီးတည်ရှိသည်။ အသက်(-)နှစ်သာရှိသေးသော “မြညို“သည် ထမီလေးတိုတိုဝတ်ခါ ရိုးမကို ကျောပေးလျက် မုတ်သုန်လေကို ဆန်တက်ခါ ရွာဆီအပြေးပြန်လာခဲ့သည်။ အရှေ့မှဝင်တိုက်နေသောလေနှင့် မိုးကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးစိုရွှဲကာ လုံးတစ်ထွားကြိုင်းသော ပေါင်တန်ကြီးများကို အထင်းသားမြင်နေရသည်။ နို့လေးနှစ်လုံးကမြေမှထွက်စို့ကာစ မျှစ်စို့ပေါက်ကြီးနှယ်ပမာငုံငုံဖူးဖူး တင်းတင်းပြည့်ပြည့်ကြီး ဖြစ်သည်။ မြညို အသက်(၁၂)နှစ်တွင် ဖခင်ဆုံးခဲ့၏။ အမေနှင့်အတူ လူမမယ်ညီမလေးတစ်ယောက်နှင့် မြညိုသာ ကျန်ရစ်သည်။ မြညို စာမတတ်၊ စာမသင်ရ သို့သော် သပြေအိုင်နဲ့မြညို နေထိုင်အသက် ရှင်နေရသမျှ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် မြညိုစိုးစိမျှ မပူမိချေ။
ယခုလို မိုးကျလျှင် မျှစ်ချိုး၊ မှိုရှာ အတို့ခူးနှင့်ဝင်ငွေလှိုင်သည်။ သားအမိ(၃)ယောက် အတွက် တစ်နေ့စာကို မြညိုနေ့တစ်ဝက်ဘဲနှင့်ရှာပြီး စားလို့လောက်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လှည်းကူးမှ ဘကြီးဦးကျော်မောင်တို့ ရောက်လာလျှင် အ၀တ်အဟောင်းထည်လေးတွေပါပါလာတတ်သည်။ တစ်ဝက်ဈေးနှင့်ဝယ်နိုင်သည်။ ခေါက်ထီးပေါ်သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း မြညို ၀ါးခမောက်ကြီးကိုပင်ခုံခုံမင်မင်ဆောင်းက မိုးရာသီအလီလီကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ မြညိုတွင် လိုချင်တပ်မက်သောစိတ်ဘာတစ်ခုမျှမရှိ။ အေးချမ်းရောင့်ရဲစွာ အသက်ရှင် လာခဲ့သည်။ သပြေအိုင်နှင့် ရိုးမတောင်ခြေကြား၌ ခင်တန်းကြီးတစ်ခုရှိသည်။ လူတစ်ရပ်ကျော်သော ကိုင်းပင်နှင့် နဘူးပင်၊ ကြောင်ရှာပင် တွေလည်းရှိသည်။ အိမ်အပြန် မိုးဦးကျကာလ၌ မြညို တောထဲမှပြန်လာလျှင် ကြောင်ရှာတပွေ့၊ ဇီးဖြူသီးလုံးလေးပြည်ခန့် အမြဲပါပါလာသည်။ ထိုအသီးအနှံလေးတွေက ဆယ့်လေးငါးခြောက်ကျပ် အမြဲရသည်။ ထောက်ကြံ့သို့ နှစ်ရက်တစ်ခေါက်၊ သုံးရက်တစ်ခေါက်သွားနေသော ဒေါ်လေးမြခင်ရှိနေသဖြင့် အသီးအနှံများကို ဒေါ်လေးမြခင် လှည်းနှင့်ပင် တင်ပေးလိုက်ရသည်။
ယနေ့တော့မိုးကအချိန်မဟုတ်ဘဲ ရွာချ၏။ မြေသင်းနံ့တွေ ထောင်းထောင်းထကုန်၏။ လယ်ကွက်ထဲ ရေတွေဖွေးဖွေးထကုန်သည်။ သည်အချိန်သည်ကာလဆိုသည်က မိုးမကျမှီ မြညိုတို့ တစ်ရွာလုံး ထင်းခုတ်ကြရသည်။ ခုတ် ၍ရသမျှ ထင်းကို တောထဲမှာပင် ထားရစ်ခဲ့ကာ အိမ်အပြန် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရှာဖွေခူးကာ အိမ်ပြန်ကြရ၏။လှည်းတစ်စီး သို့မဟုတ် လှည်းနှစ်စီးစာရမှ ခုတ်ပြီးထင်းများ ရွာသို့ သယ်ဆောင်ရ၏။ ယခု မြညိုထင်းခုတ်ပြီး ပြန်လာ၏။ လမ်းမှာမိုးရွာသည်။လူပြတ်သည့် ခင်တန်းကိုင်းတောကို မိုးထဲရေထဲဖြတ်လျက်ရှိ၏။
ကျုပ်နာမည် ရွှေဒေါင်း။အလုပ်က ဖဲလည်ရိုက်သည်။ ကြက်တိုက်တယ်။ လေးကောင်ဂျင်ကစားတယ်။ မနေ့က ကိုသာအေး တာဝန်ယူဖွင့်သော အာဝါဒေး ကစားပွဲကို “ဘုရားငုတ်တို“ရွာ၏အနောက် တောထဲ၌ပြုလုပ်၏။ ကျုပ်လိုပင် ဖဲလည်ရိုက်သော အမျိုးကောင်းသားတွေပါ အာဝါဒေးမှာ ဆုံကြသည်။ အာဝါဒေးကို ရောက်မဲ့သာရောက်သွားသည်။ ရွှေဒေါင်း၌ ပိုက်ဆံခြောက်ကျပ်ပဲပါသည်။ သည့်အရင် တစ်ရက်စောပြီးဖဲရှုံးထားသည်က ဖြူခါ ပြာခါကျနေသည်။ သို့သော် ရွှေဒေါင်းတို့က မှင်မောင်းကောင်းကောင်းနှင့် ဖဲဝိုင်းမှာထိုင်သည်။ ဒိုင် ကိုကုလားကရွှေဒေါင်းနှင့်ရင်းနှီးသည်။ လက်ခုပ်ပင်ရွာသားဖြစ်သည်။ ရွှေဒေါင်းနှင့်လည်း စပ်တူစပ်ဖက် ရိုက်ဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် သုံးပင်တစ်ပင်ကျော်ကာ ကစားသော ရွှေဒေါင်း ဖဲမြူးနေပုံကိုကြည့်၍ “ကြိုး“ဆွဲကစားသည်။ သဘောကရွှေဒေါင်းနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် စပ်တူရိုက်ကြသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ ဒိုင်လုပ်သူ ကိုကုလားကလည်းလက်ဗလာဖြင့် ၀ိုင်းတည်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုးသားတွေသိကုန်သည်။
သုံးလေးလှည့် အရော်အစားကျန်သောအခါ ပူညံ ပူညံဖြစ်လာကာ ၀ုန်းဝုန်း…..၀ုန်းဝုန်း…..ဒုတ်ဆွဲ ဓါးဆွဲဖြစ်သည်။ထိုအခါ ရွှေဒေါင်း အနီးရှိ မကျည်းပင်စုက ကျင်သိန်းကို ရွှေဒေါင်းက ၀ိုင်းအလယ်မှအကောက်ပန်းကန်ပြား (ကြွေပန်းကန်ကြီး) နှင့်မျက်နှာကို ထခုတ်သည်။ ကိုကျင်သိန်း မျက်နှာသွေးများ ဖြာကျ၏။ ကိုကုလားက ခါးပုံစထဲမှ ဓါးတိုလေးထုတ်နေစဉ် သူ့လက်ဖျားတွင်ထိုင်နေသော ကြီးငွေ (ဘုရားငုတ်တို) ရွာသားက ထပြီးလုံးသည်။ ၀ရုန်းသုန်းကား………..။နောက်မှ ဘာတွေဖြစ်ကျန်ခဲ့သည်ကို ရွှေဒေါင်းမသိ ၀ိုင်းအလယ်မှ လောင်းကြေး နှစ်ထောင်ကျော်လောက်ကို သိမ်းကြုံးယူကာ ထွက်ပြေးသည်။ ကျောပြင်ကို ပူခနဲ ကျင်ခနဲလာရောက်မှန်သော လေးဂွဒဏ်ကြောင့် နောက်ကို တစ်ချက်လေးမှ လှည့်မကြည့်ဘဲ ခြေကုန်သုတ်ပြေးသည်။ ရွှေဒေါင်းနောက်မှ အမဲဖျက်မည့် လူအုပ်ကြီးက ဒုတ်တွေ ဓါးတွေနှင့် သူရဲမရဲစီးကာ ပြေးလိုက်ကြသည်။
ရွှေဒေါင်းကံကောင်းချင်တော့ သပြေအိုင်အနောက်တောနား အရောက် အချိန်အခါ မဟုတ်ဘဲ မိုးက သဲသဲမဲမဲ ၀ုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်းရွာချလိုက်သည်။နောက်ကလူအုပ် သူ့ကိုကျော်ကာ မန်ကျည်းပင်စု ရွာဖက်သို့ ဆက်လိုက်သွားကြသည်။ရွှေဒေါင်း ၀ပ်နေခဲ့သည်။ ၀ပ်ကျင်းက သပြေအိုင်နှင့် ရိုးမတောတန်းကြားရှိ ခင်တန်း ကိုင်းတော မုတ်သုန်လေသည်။ ခင်တန်းရှိ ကိုင်းပင်များ ကြောင်ရှာပင်များခါးပြတ်အောင်ဖြတ်တိုက်နေသည်။ နဘူးပင်နှင့် ကြောင်လျှာပင်များ အနီးရောက်သောအခါ “မြညို“လက်ထဲက ဓါးလေးကို မြေ၌ချကာ ထမီပြင်ဝတ်သည်။ ထမီက ဒူးကျော်ကာ ၀င်းဝါတင်းအိသော သလုံးသားလေးတွေပေါ်နေ၏။ ကုန်းမို့မို့ဆင်ခြေလျောဘေး တစ်နေရာ၌ပေါက်နေသော ကြောင်လျှာပင်တွင် ရှည်လျားအပြားကြီးသော ကြောင်လျှာတွဲကြီးများရှိနေသည်။
မြို့သူတွေလို ခပ်နွဲ့နွဲ့မဟုတ်သော မြညိုက ကိုင်းတောထဲတိုးဝင်ကာ ဓါးတိုလေး ဟိုရမ်းဒီရမ်းဖြင့် ကြောင်လျှာပင်ကြီးအနီးရောက်အောင်တိုးလာ၏။ မိုးက ရွာသွန်းဆဲ။ ရွှေဒေါင်းက ယခုအချိန်တွင် ခြေသံကြားရုံဖြင့် ဂုတ်ယားနေသူမို့ မြညို တောတိုးဝင်လာသံကြားသောအခါ ငြိမ်ပြီး အသက်အောင့်ထားမိသည်။ မြညို ကြောင်လျှာပင်ကြီး အနီးရောက်လာသောအခါ ရွှေဒေါင်းလူလုံးကွဲစွာ တွေ့လိုက်ရသည်။ သပြေအိုင်ရွာက မခွေးမသမီး မြညိုပဲဟု သိလိုက်မှ စိတ်အေးသွားသည်။ ဒီကောင်မလေး မနှစ်က အလှူပွဲတွင် ကွမ်းတောင်စကိုင်ရ သည်ကို ရွှေဒေါင်းသတိထားမိသည်။ သပြေအိုင်သူ မအေးခင်နှင့် ရွှေဒေါင်း သမီးရည်းစားဖြစ်စဉ် မြညိုကို ကြက်တောင်စည်းလေးနှင့် ရွာလမ်းတွင် ဖန်ခုန်နေခြင်းကို အမြဲတွေ့ရလေသည်။ ကောင်မလေး အထွားမြန်သည်။
မအေးခင်နှင့် လှည်းကူးက စာရေးကိုခင်မောင်တို့ညားသွားသောအခါ ရွှေဒေါင်း သပြေအိုင်ကိုစိတ် အနာကြီးနာကာ လုံးဝ ခြေဦးမလှည့်ခဲ့တော့။ ယခု သုံးနှစ်ခန့်အတွင်း မြညို အပျိုကြီးဖားဖားဖြစ်နေသည်ကို တအံ့တသြ တွေ့ရလေသည်။ ဒီကောင်မလေး သူ့ကိုတွေ့လို့မဖြစ်။ ရွာထဲတွင် သတင်းပျံ့သွားလျှင် အသက်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာအိုးစားကွဲသွားနိုင်သည်မို့ အသံမပေးငြိမ်နေ၏။ ရေစိုအ၀တ်အစားတွေနှင့် မြညို တင်ပါးကြီး ဟိုကူး သည်လှမ်း လှုပ်ရှားလေတိုင်း တုံခနဲ သိမ့်ခနဲ လှုပ်ခါ လှုပ်ခါသွားပုံကြီးမှာ ငုတ်နေသော ကာမစိတ်ကိုနှိုးဆွသလိုကြီး ခံစားရ၏။ သို့သော် မခွေးမ ဆိုသည်ကလည်း ရွှေဒေါင်းနှင့် သူငယ်ချင်းလို နေလာခဲ့သူဖြစ်သဖြင့် မခွေးမသမီးမြညိုလေးသည် စင်စစ် ရွှေဒေါင်း သမီးအရွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့ကပင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမည့် ကလေးများပင် မဟုတ်ပါလား။
ကောင်းစိတ်၊ မကောင်းစိတ် နှစ်ဖြာဖြင့် မြညို ကြောင်လျှာပင်ခွတက်သည်ကို ငေးကြည့်နေမိ၏။ မြညိုက သစ်ပင်တက်လည်း ကျွမ်းသည်။ ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို ကြောင်လျှာပင် ပင်စည်အား ညှပ်ကန်ပြီး ဖက်တက်သည်မို့ ဒူးနှစ်ဖက်က ဘေးသို့ကားထွက်နေ၏။ တိုနံ့နံ့လေးဝတ်ထားသော ထမီကြောင့် ဖင်ကမလုံဘဲ ၀င်းဝင်းအိအိ ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ အသားပြင်လေးကို ဖြတ်ခနဲ လက်ခနဲ တွေ့ရ၏။ ခြေနှစ်ဖက်ကို ဆန့်ကန်သွားတိုင်း အပေါ်တစ်ဆစ်ရောက်ပြီး ဖင်နှင့်ဖနောင့်မှေးကာ ခေတ္တနားသောအခါမျိုးတွင်မူ……။ဆယ်ကျော်သက် မြညို၏ ရွှန်းစိုမှည့်အိနေသော စောက်ဖုတ်ဝင်းဝင်းလေးမှာ အမွှေးအတောင်ပင် မစုံသေးဘဲရှိနေကြောင်း ရွှေဒေါင်းကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကြီးတွေ့ရလေသည်။ ဒူးနှစ်ဖက်ဘေးကို ဖြဲကားထားသလို ဖြစ်နေသောကြောင့်လည်း မြင်ကွင်းက ရှင်းလင်းကျယ်ဝန်းနေ၏။ သစ်ပင်တက်သည် ဆိုကတည်းက တစ်ဖက်တည်းမှ တသမတ်တည်းတတ်၍ ရသည်မဟုတ်။
အလိုက်သင့်လေးလည်လည်သွားပြီး အရှေ့၊ အနောက် တောင် မြောက် အရပ်လေးမျက်နှာမှ တွယ်တတ်ရသောကြောင့် ရွှေဒေါင်းမြင်ကွင်းတွေက အမျိုးမျိုးပြောင်းနေသည်။ အထူးသဖြင့် အောက်မှအပေါ်သို့ပင့်ကြည့်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖင်ပိုင်းကျောပိုင်းကို မြင်ရပြန်သောအခါ မြညို ဟုပင်ရွှေဒေါင်း မထင်တော့ချေ။(၂၀)၀န်းကျင် အပျိုကြီးတစ်ယောက်၏ တင်ပါးကြီးများအလား ကြီးမားပြန့်ကားလျက် တစ်ထွက်နေခြင်းကြောင့် မြညို အသက်အရွယ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုက မည်သို့မျှလိုက်လျောညီထွေမှု မဖြစ်ချေ။
“အ……အမေ့“မြညိုထံမှ လွှတ်ခနဲ အော်သံလေးကြားရပြီး လက်တစ်ဖက်က ကြောင်လျှာသီးကြီးသုံးလေးတောင့်ကိုကိုင်ထားကာ ပင်စည်ကိုဖက်ရင်းတစ်ခြားလက်တစ်ဖက်က ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားပုတ်ခါချနေ၏။ကောင်မလေးခါချဉ်ထုပ်နှင့်တိုးနေဟန်တူသည်။ ကြောင်လျှာပင်တွင်ခါချဉ်ထုပ်စွဲလေ့မရှိသော်လည်း ဘေးတွင်ကပ်ပေါက်နေသော ၀ါးရိုင်းပင်ငယ်များ နဘူးပင်များမှ ကူးလာဟန်တူသည်။ အတန်ကြာပုတ်ခါပြီးမှ မခံနိုင်တော့ဟန်ဖြင့်သစ်ပင်ပေါ်မှ ဒရောသောပါးလျောချလာသည်။ မိုးက တသဲသဲရွာချနေစဉ် သစ်ပင်ကလဲ ချောနေစဉ်မို့မြညို ဆယ်ပေခန့်အကွာမှ ပြုတ်ကျလာသည်။ ထမီအောက်စနှုတ်ခမ်းလေးက သစ်ပင်အစွန်းတစ်ခုနှင့် ငြိကာ ဆွဲလှန်လိုက်သလိုကြီးဖြစ်သွားကာ စောက်ပတ်အယ်အယ်မို့မို့ကြီးကို ၀င်းဝင်းဝါ၀ါကြီး တွေ့လိုက်ရသော ရွှေဒေါင်းသည် မကောင်းဆိုးဝါး အပူးခံလိုက်ရသလိုတုန်ရီသွားရသည်။
လူပြတ်သော ခင်တန်းတောထဲ၌ ဆူဖြိုးသော မျှစ်စို့ပေါက်ကြီးပမာ တင်းထစ်နေသည့် မြညိုအား မလုံမလဲ အနေအထားတွေ့ရသောရွှေဒေါင်းသာမဟုတ် မည်သည့် ပုရိသယောင်္ကျားမဆို လိုးချင် ဖြုတ်ချင်သော စိတ်တွေ တားမရ ဆီးမရ ၀င်လာမည်သာ ဖြစ်ချေသည်။သစ်ပင်ခြေရင်း ကိုင်းတောစပ်လေးထဲသို့ ထွေးကနဲ ပြုတ်ကျသွားသော မြညိုအား ရွှေဒေါင်းတစ်စုံတစ်ရာ ကူညီပေးရန် အပြေးအလွှားရောက်သွားလေသည်။ မြညို ခွေခွေလေးလဲကာ မေ့မျောနေရှာသည်။ ဆံနွယ်လေးများကရေစိုလျက် မျက်နှာနုနုလေးပေါ်သို့ ဖရိုဖရဲပြန့်ကျဲကျနေသည်။ မိုးဒဏ်လေဒဏ်ကြောင့် အသားအရေလေးများပြာနှမ်းကာ ချမ်းနေရှာဟန်တူသည်။ လက်ထဲတွင် ကြောင်လျှာသီးသုံးလေးတောင့်က တင်လျက်အနေအထားနှင့်ပင် တွေ့နေရသည်။ ဂရုဏာသက်စရာ ကောင်းသော ကောင်မလေးမျက်နှာကိုကြည့်ကာမြညိုဘေး၌ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်သည်။
သူမနှင့်မလှမ်းမကမ်းတွင် မြေ၌စိုက်ထားသော ဓားတိုလေးကိုကြည့်၍ ထင်းခုတ်ပြန်လာတာပဲဟု ရွှေဒေါင်းသိလိုက်ရသည်။ သို့ဆိုလျှင်အဖော်များမည်သည့်နေရာတွင် ကျန်ရစ်ခဲ့သနည်းဟူသော အတွေးများနှင့် ဟိုသည် လည်ကိုဆန့်၍ကြည့်၏။ မိုးသံလေသံများမှအပ၀န်းကျင်သည် တသဲသဲလှုပ်ခတ်နေပြီး ဘာမှမမြင်ရ။ ပြီးတော့ သူတို့ရောက်နေတဲ့ ကုန်းကမူလေးကလည်း လူသွားလမ်းနှင့်ကတစ်ခေါ်မက ဝေးသည်။ ရေစိုလေးဖြင့် ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် အတွင်းပစ္စည်းလေးများကို အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်နေရသော မြညိုကိုယ်လုံးကို အပေါ်မှစီးမိုးကာ သူကြည့်နေသည်။ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာသည်။ အေးစက်နေသော ရာသီဥတုကြားမှပင် သူ့ရင်တွေပူလောင်လာကြသည်။
ခေါင်းငုံ့ထားကာ မြညိုအပေါ်မှစိုက်ကြည့်နေသော ဆံပင်များမှ မိုးရေစက်တို့ မြညိုကိုယ်ပေါ် တစ်ပေါက်ပေါက်ကျ၏။ မြညို ဒူးတစ်ဖက်က ဘေးသို့ကားလျက် ကွေးနေ၏။ ကျန်တစ်ဖက်ကမူ ပုံမှန်အတိုင်းဆန့်ထားသည်။ ထမီလေးက ဆန့်ထားသော ဒူးခေါင်းကိုကျော်၍ ပေါင်လည်သို့ရောက် နေသည်။ ပေါင်သားတစ်တစ်ကြီးများတွင် သစ်ပင်နှင့်ပွတ်တိုက်မိသော အစင်းရာကြီးများကိုတွေ့ရသည်။အခြားဘယ်နေရာ ဒဏ်ရာသေးလဲဟု သူက စိုးရိမ်တကြီးလျှောက်ကြည့်သည်။ကွေးထားသောဒူးထိပ်တည့်တည့်၌ ကျပ်ပြားခန့် အရေပြားလေးကွင်းထွက်ကာ သွေးစို့ရုံစို့ကာ ဖွေးနေဆဲရှိသည်။ မကြာခင်သွေးများထွက်လာနိုင်သည်။ ထမီလေးက ဒေါင့်တန်လေး ကွဲဟနေသဖြင့် အတွင်းပိုင်းကို မပီဝိုးတ၀ါး မှောင်မှောင်မြင်ရ၏။ ရွှေဒေါင်း အသက်သာ(၃၀)ကျော်လာသည်။ မိန်းမအင်္ဂါကိုအနီးကပ် ဟုတ်တိပတ်တိမမြင်ဘူးသေး။ သူ့အသိ သူ့မြင်ကွင်း၌ ဖဲပွင့်များနှင့် တိုက်ကြက်လည်ပြောင်ကြီးများ ရိပ်သွင်သာ ကြီးစိုးနေခဲ့ကြ၏။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ငုတ်လျှိုးနေခဲ့သော ကာမစိတ်က လူမိုက်ကြီး ရွှေဒေါင်းနှလုံးအိမ်မှ လူးလွန့်နိုးထလာ၏။ မကောင်းမှုသည် အချိန်အခါအခြေအနေပေးသည်နှင့် ကျူးလွန်ရန်အတွက် လူတိုင်းအသင့်ရှိနေသည် ဆိုသော သိုးဆောင်းစကားပုံလေးက ရွှေဒေါင်း၏အဖြစ်ကိုတင်ကြိုသိရှိ ထုတ်နှုတ်ရေးသားထားဟန်တူ၏။ ရွှေဒေါင်းလက်တစ်ဖက်က တင်းနေဟနေသောထမီလေးအပေါ်စကို အသာဆွဲမတင်ကြည့်သည်။ ပေါင်လည်ရောက်နေသော ထမီလေးက မြညို၏ အပျိုရိုင်း ရတနာဂူကို လုံခြုံစွာကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိ။အကွဲကြောင်းထင်းထင်းဘေးနှုတ်ခမ်းသားတင်းတင်းနှင့်စင်းစင်းကြီး ကားထားပေးသော ပေါင်ကြားမှ မြညို၏အထွဋ်အထိပ်ကလေး မောက်မာဝါကြွားနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ရွှေဒေါင်းငေါက်ခနဲမတ်တောင်လာသည်။
ကျားသဘာဝအလျောက်စောက်ပတ် မြင်လျှင်ကျားလိင်အင်္ဂါကြီးက ခေါင်းထောင်လာတတ်ကြစမြဲဖြစ်၏။ ပန်းသေ ပန်းညိုးဖြစ်နေသူများနှင့် မိန်းမအင်္ဂါ မကြာခဏ ထိတွေ့ဆက်ဆံလျက် ရိုးနေသောသူများမှအပ ယင်းသို့“ဒိုင်း“ကနဲမတ်သွားတတ်ကြသည်က ကျားသဘာဝပဲဖြစ်သည်။ လူသူကင်းဝေးသောဤခင်တန်းလေးအတွင်း၌ ယခုနေ မြညိုအား သူပြုကျင့်ရသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာဆိုသည်ကို ရွှေဒေါင်း မစဉ်းစား။ ရသည် ဟုပဲတွေးသည်။ ထို့ကြောင့် ထမီစလေးကို အထက်သို့တွန်းကာဆွဲလှန်လိုက်သည်။ ဖြစ်ချင်ရာ ဖြစ်စေဟုသိစိတ်က ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစက်ယန္တရားကြီးတစ်ခုစတင် လှုပ်နှိုးမောင်းနှင်လိုက်သလို တုန်ခါလာသည်။ ဒူးတွေတဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်။မိုးရေစက်တို့ထိမှန် နေသော မျက်နှာပြင်ကြီးက ဘာမှမသိတော့သော အသိမဲ့ကျောက်ဆစ်ရုပ်မျက်နှာကြီးပမာ မြညို စောက်ဖုတ်ကြီးကို တစိုက်မတ်မတ်ကြီး စားတော့ ၀ါးတော့မလို စိုက်ကြည့်နေ၏။
လက်တစ်ဖက်က ဆန့်ထားသော မြညို၏ခြေကျဉ်းဝတ်လေးကိုကိုင်ကာ တစ်ဖက်ကွေးနေသော ဒူးကဲ့သို့ပင့်တင်ကာ ကွေးပေးလိုက်သည်။ မြညို၏ဒူးနှစ်ဖက်လုံးက ပြဲပြဲကားကားကြီး ကွေးသွားကာ ပေါင်တန်ဖွေးဖွေးကြီးများက ဆွဲဖြဲထားသလို တစ်ဖက်တစ်ချက်ပြဲထွက်နေကြသည်။ ကောင်မလေး အမွှေးပင်မစုံရှာသေး။ ဆီးခုံနုနု မို့မို့လေးတွင် ထူးထူးခြားခြား လက်နှစ်ဆစ်ခန့်ရှည်သော စောက်မွှေးတစ်ပင်ကို အနီးကပ်မြင်ရပြီး ကျန်ဆီးခုံတစ်ပြင်လုံးက အမွှေးနုလေးများရှင်သန်ရန် အားယူနေ ဆဲရှိသေး၏။
အသက်အရွယ်က ငယ်ရွယ်နုနယ်နေသော်လည်း ယောနိအင်္ဂါကြီးက ရွှေဒေါင်း ကိုက်စားချင်စရာကြီးဖြစ်လောက် အောင်ဝင်းအိမို့မောက်နေ၏။ ယောင်္ကျားကြီးလက်တစ်ဝါးပမာ ဗျက်တစ်ကျယ်၏။ ကျယ်ဝန်းသော ဆီးခုံလွင်ပြင် အထက်ပိုင်း(ချက်အောက်အရစ်)လေးမှ အောက်ဖက်သို့ ရှုးဆင်းသွားသည်။ တြိဂံပုံမျက်နှာပြင်ကြီးအလယ်တွင် ထူအမ်းထူထဲသော နှုတ်ခမ်းသားနှစ်လုံးက ကျွဲမြော့ကြီးနှစ်ကောင်ဘေးချင်းယှဉ်ပူးကပ်နေသည် ထင်ရသည်။ ထိုအကွဲကြောင်းလေးက ဖင်ကြားနှင့်ဆက်သည်။အကွဲကြောင်းနှင့်ဆက်လျက်တစ်သားတည်း ကွေးဝင်သွားသောကြောင့် စောက်ပတ်မမြင်ဘူးသော ရွှေဒေါင်း အရမ်းအံ့သြ အံ့အားသင့်သွားသည်။
၀တစ်သောဖင်ကြားအရေးအကြောင်းကြောင့် စောက်ပတ်အကွဲနှင့် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်းဖြစ်နေဟန်ရှိကြောင်းရွှေဒေါင်းမသိ။ ဒီကောင်မလေးဟာကြီးက ဘယ်လိုကြီးလဲဟု ၀ိုးတိုးဝါးတားစဉ်းစားသည်။ စာရေးခင်မောင်နှင့်ယူသွားသည့် အေးခင်နှင့်ငယ်စဉ်က အတူကစားရင်း ထိုးဖူးသည်။ ထိုစဉ်က မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသော အေးခင်စောက်ပတ်မှာ ဒီလောက်အကွဲကြောင်း မရှည်ပါဘူးဟုထင်သည်။သူကစောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကိုဖြဲကြည့်ချင်၏။ ထိုသို့ဖြဲကြည့်မှ အပေါက်ဝဘယ်နားမှာ ရှိသည်ကို အတိအကျသိကာ သူ့လိင်တန်ကြီးကိုထိုးသွင်းလိုးထည့်ရန် အဆင်ပြေမည်။ သူက တုန်ခါနေသော လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်ရင်း မြညို ယောနိအင်္ဂါစပ်ကြီးအပေါ်ချိန်ရွယ်လိုက်၏။
“မြညို……. ဟေး မြညို“ ရွှေဒေါင်း တစ်ကိုယ်လုံး ဂုတ်မှကိုင်ကာ ဆွဲခါပစ်လိုက်သလိုတုန်ခါသွားသည်။ ဆတ်ခနဲလက်ကို ပြန်ရုတ်လိုက်သလို ထမီလေးကိုကမမ်းကတန်းဆွဲအုပ်ပြီး စောစောက မိမိပုန်းဝပ်နေခဲ့သော ကုန်းကမူဆင်ခြေလျှောအောက်ဖက်သို့ ဆင်းလိုက်ရ၏။ စကားပြောသံတောတိုးသံများနှင့်အတူ သပြေအိုင်မှ မောင်ကျင်၊ ရေချမ်း၊ မိဖဲ၊ မစိုးမြင့်၊ မိသိန်း တို့ကို ဓားကိုယ်စီနှင့် တွေ့လိုက်ရသည်။ ရွှေဒေါင်း ခေါင်းကိုဝပ်ချလိုက်သည်။
“ဟိုမှာ မြညို သတိလစ်နေတယ်““ငါထင်သားပဲ…..ကြောင်လျှာတော တိုးနေတာပါလို့“မစိုးမြင့်က “ငါထင်သားပဲ“ဟု သူ့ဝသီအတိုင်း ပြော၏။ မောင်ကျင်က ခါးတွင်စည်းထားသော ၀ါတာဖလူး(ပလပ်စတစ်မိုးကာ)ကိုဖြုတ်ပြီး မြညိုကိုအုပ်ပေးသည်။ ဘေးတွင်ကျနေသော ကြောင်လျှာတောင့်များကို မစိုးမြင့်ကတစ်တောင့်ချင်းလိုက်ကောက်၏။ မိဖဲအလန့်တကြားအော်လိုက်သံနှင့်အတူ ရေချမ်းကကျားတစ်ကောင်လို လွှားခနဲ မြညိုအနားရောက်ခါ ပွေ့ချီလိုက်သည်။ မိဖဲနှင့်မိသိန်းတို့က မြညိုထမီကို လုံလုံခြုံခြုံဖြစ်စေရန်ဆွဲဖုံးပေးကြသည်။ “နင် ကလဲ အရေးထဲ“ဟု မိဖဲက မာန်မဲသည်။“မြန်မြန်ထမ်းခဲ့ဟေ့……ရေချမ်း အအေးမိသွားမယ်“ မိဖဲက ပြောပြီး သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ ရွာအပြန်လမ်းကိုလျှောက်သွား ကြလေသည်။
ရွှေဒေါင်း…….တည်ငြိမ်ခန့်ညားသော မျက်နှာကြီးဖြင့် သပြေအိုင်ရွာအတွင်း လျှောက်လှမ်းလာသည်။ သင်္ကြန်မတိုင်မီ ရွာခဲ့သောမုတ်သုန်မိုးကဖုံမှုံများကိုသိပ်ကာ အမှိုက်သရိုက်တွေ သန့်စင်စေသဖြင့် ရွာလမ်းဘေးရှိ သစ်ပင်ပန်းမာန်များ စိမ်းစိုရွှန်းလက်ကာ နေရောင် တောက်တောက်ထပြီး စိုလွင်နေ၏။ ရွှေဒေါင်း အနောက်မှကပ်လျက်ပါလာသော မိဖဲ၊ မောင်ကျင်နှင့် ရေချမ်းတို့လက်ထဲတွင် ဆေးအိတ်ပါလာကြသည်။ ရွှေဒေါင်းက မခွေးမအိမ်သို့သွားနေကြ လာနေကြ လူတစ်ယောက်လိုပင် တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးဝင်သည်။
မောင်ကျင်၊ မိဖဲနှင့် ရေချမ်းတို့ တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ကာ ပါးစပ်တွေဟသွားကြ၏။“ကိုရွှေဒေါင်း ကြီးက မခွေးမ အိမ်ကိုသိလို့လား ဟင်“ “သိလို့ နေမှာပေါ့ဟ“တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြိပ်ပြောရင်း ကိုရွှေဒေါင်းအနောက်ကပ်လိုက်လာကြသည်။“အော်….ကိုရွှေဒေါင်း အဲ ဆရာ လာလာ““ရပါတယ်…..မခွေးရယ် ဒို့က သူငယ်ချင်းတွေပဲ ခေါ်ချင်သလိုသာ ခေါ်ပါ။ ဖဲသမားရွှေဒေါင်းလို့ မသတ်မှတ်ကြရင်ပဲ ငါကျေနပ်ပါပြီ““ကျွန်မတို့လဲ ဆရာရွှေဒေါင်း ပရောဂကုတယ် ဗိန္ဓောဆရာလုပ်တယ်ဆိုလို့ အံ့သြနေတာ“ဆရာရွှေဒေါင်း ရွှေကိုင်းမျက်မှန်ကိုပင့်တင်ကာ အိမ်ခေါင်းရင်းတွင် အဆင်သင့်ခင်းကျင်းထားသော သင်ဖျူးဖျာပေါ် တင်ပြင်ခွေထိုင်ရင်း။
“ဥ…ပါဒ်….တီ…..တင်.ဖြစ်တည်…ပျက်လောကကြီးမှာ ဘာမှမမြဲဘူးဟ…..မခွေး…အမြဲဆိုးနေလို့လဲ အဲ့ဒီလူဟာ လူဆိုးဘ၀နဲ့ဇာတ်သိမ်းချင်မှသိမ်းတာ….ကဲ စမ်းမကြီးရွာက ရွှေအောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ…. ရိုးလိုက်တာမှ အေးလိုက်တာမှ တစ်ရွာလုံးလဲသိတစ်နယ်လုံးသိ…ဟော..ဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့ မရီးမမယ်ခင်ကို မြက်ခုတ်ဓါးနဲ့ တစ်ချက်တည်းပိုင်းပြီး ထောင်နန်းစံပါရောလား““ဟုတ်တယ်နော် ရွှေအောင် လူသတ်မှုကျူးလွန်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမယုံဘူး“ရေချမ်းက ရေနွေးအိုးနှင့်ကွမ်းအစ်လာချရင်းပြော၏။
“အင်း…ကံ….ကံ၏အကျိုးပေါ့….ရှေးကုသိုလ်အထုံ ရေစက်ပါရမီကြောင့်လွဲချိန်ရောက်တော့လဲ အလိုလို ပြောင်းလဲသွားကြတာပါပဲ။ကျုပ်ဆေးဆရာဖြစ်လာတာလဲ ဘယ်သူမှမယုံဘူးလေ…….ဒီလိုပေါ့“ပြောပြောဆိုဆို ရွှေဒေါင်း ဘုရားစင်ဖက်လှည့်ကာဦးချပြီး မဖဲလက်ထဲမှဆေးအိပ်ကိုယူကာ အင်းတစ်ချပ်ထုတ်ကိုင်ပြီး အာရုံပြုသည်။လူနာက ခြေပိုင်းမှာဒဏ်ရာ ရနေတယ်နော်။“ရှင်““ဒူးခေါင်း….အင်း….၀ဲဘက်ဒူးမှာ ကျပ်ပြားဝိုင်းလောက် အသားလေးထွက်ပြီး အနာဖြစ်နေတယ်……ယာဘက်ပေါင်မှာ အစင်း….အစင်း….အော်….သစ်ပင်ပေါ်က ကျတာကိုး“
“ဗျာ….““ရှင်……..“ဆရာရွှေ့ဒေါင်း အင်းချပ်ကိုနဖူးပေါ်ကပ်တင်ထားပြီး ပါးစပ်မှတစ်စုံတစ်ရာတတွတ်တွတ်ရွတ်ဆို၏။“ကျတာ….ကြောင်လျှာပင်““ဟင်““ဟာ““တော်သေးတာပေါ့ ….အောက်မှာစိုက်ထားတဲ့ ထင်းခုတ်ဓါး အသွားပေါ်မကျလို့““ဟောဗျာ““သွားထမ်းခဲ့ကြတာ…ကျားနှစ် မသုံး စုစုပေါင်း ငါးယောက်““အို….ဘုရား……ဘုရား“မဖဲက ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်နေရာမှ နောက်သို့တွန့်သွားရာ မခွေးမနှင့်ပူးကပ်သွားသည်။
“ဒီအထိတော့…..မလွဲပါဘူးနော်““ဟာ…..မလွဲဘူး….မလွဲဘူး….အားလုံးကွက်တိ““ဘာကွက်တိလဲ….ငကျင် ဆရာနဲ့စကားပြောတာက““မှန်တယ်ပြောတာပါ…..မဖဲရဲ့“ အားလုံး မသိမသာလေးပြုံးစိစိဖြစ်ကုန်၏။“ခလေးမလေးက သိုက် က မခွေးရဲ့““ဘုရားရေ….သိုက်က““ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီအနားမှာ ကုန်းကမူလေးရှိလိမ့်မယ် သွားခေါ်တဲ့လူတွေတွေ့ခဲ့လား““ဟုတ်တယ်…..ဟုတ်တယ်…..တွေ့ခဲ့တယ်“ရေချမ်းက လူရှေ့တိုးထွက်ပြီး ကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်ကာပြောလိုက်သည်။
“အင်း…..ခက်တာပဲ ကလေးမလေး ကယောင်ကတမ်း အော်နေတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီနော်““ဟုတ်တယ်……ဆရာ“ မခွေးမ ဖြေသည်။“ကိစ္စမရှိပါဘူး“အအေးမိပြီး နမိုးရီးယားဝင်နေသည်ကို ရွှေဒေါင်းက ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်သမားပီပီသိ၏။ လွယ်အိတ်ထဲမှ အပူကျဆေးနှင့်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးပြားလေးများထုတ်လိုက်သည်။“ဒါ အင်္ဂလိပ်ဆေးပြားပုံစံလုပ်ထားတဲ့ ဆရာရဲ့က၀ိဗန္ဒောဆေးပြားပဲ တိုက်လိုက်……ခုတိုက်လိုက်နော်““ဟုတ်ကဲ့““ညနေ….အကောင်းပကတိ ဖြစ်မှာပါ….စိတ်ချ““ဟုတ်ရဲ့လားဆရာ……ဖြစ်နေတာကြာပြီ“ဆရာရွှေဒေါင်းကို မေး၏။ ဆရာရွှေဒေါင်း အေးဆေးစွာပြုံးရင်း…..။
“ဘုရားဂုဏ်…..သမားဂုဏ်ပေါ့ကွာ…..စောင့်ကြည့်““ရေချမ်းကလဲ ဘာတွေလျှောက်မေးမှန်း မသိဘူး“မခွေးမက ဆရာ့ကိုအားနာဟန် ၀င်တားသည်။ ရေချမ်းက မဖဲနှင့်အတူ မြညိုအခန်းထဲသို့ဝင်ရန် ဟန်ပြင်လိုက်သည်။“မင်းက ဒါ ဘယ်ကိုလဲ““မြညိုကို ဆေးသွားတိုက်မယ်လေ““မိဖဲ သွားပစေ မင်းအလုပ်လား““အဲ….ဟုတ်သား“ဟုပြောကာ မခွေးမထံသို့ တစ်ချက်ကွက်ကြည့်ပြီး မီးဖိုချောင်ဘက်သို့ထွက်သွားသည်။“ဒီကလေးက ဘယ်သူ့သားလဲ မခွေး““ကိုစိန်အေး သား ရေချမ်းလေ…..မြညိုနဲ့က မောင်နှမတွေလို ဖြစ်နေကြတာ“ဆရာရွှေဒေါင်းနားထဲ၌ “မောင်နှမတွေလို“ဆိုသောစကားကို ချန်လှပ်ပြီး“ဖြစ်နေကြတာ“ဟုကြားသွားကာ မျက်လုံးထဲတွင်အေးစက်သော အရိပ်စိမ်းများယှက်သန်း သွားကြသည်။
“မြညို သိုက်ကဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာ….ဟင်“မခွေးမက ရှေ့သို့အနည်းငယ် ထပ်တိုးကာ မေး၏။“အင်း….အဲ့ဒါကတော့ ငါလဲ မလုပ်တတ်ဘူး….မခွေး ငါက အထက်ဂိုဏ်း သက်သက်ဆိုတော့ ဒါမျိုးတွေ မလုပ်တတ်ဖူး….. မလုပ်တတ်ဖူး““ဒုက္ခပါဘဲ……အဲ့ဒါ ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲ ဟင်““မိုးရွာတုန်းက လေတွေတိုက်နေတုန်း ဒီခင်တန်းကုန်းကို သူအရောက်တိုးဝင်သွားတာပဲ ကြည့်ပေါ့…..ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပြန်ခေါ်ချင်လို့ဆိုတာ ထင်ရှားတယ်လေ““အမယ်လေး….ဘုရား….ဘုရား….“ယုံလွယ်ကြောက်လွယ်သော သပြေအိုင်မှာမွေး၊ သပြေအိုင်မှာပဲ ကြီးပြင်းကာ၊ သပြေအိုင်မှာပဲ အိမ်ထောင်ကြပြီး၊ သပြေအိုင်မှာပင်ခေါင်းချရန် ခြေလှမ်းစနေသော မခွေးမအတွက် ဆရာရွှေဒေါင်းပြောသမျှ အမှန်ချည်းပဲ ဖြစ်နေရသည်။
မောင်ကျင် ဆေးပေ့ါလိပ်ကိုတစ်ချက်ရှိုက်ရင်း ၀င်ပြောသည်။“ဆရာ လူနာကို တစ်ချက်ကြည့်ဦးမလား ဆရာ““ရပါတယ် နေပါစေ နေကောင်းလာမှ သူ့အခြေအနေကြည့်ရတာပေါ့…မှုတ်ဖူးလား““ကိုင်း…ဒါဖြင့်လဲ…အပြင်ခေါ်ခဲ့လေကွယ်“ ဆရာရွှေဒေါင်းက ဘာမှမထူးခြားသလို ဆေးလွယ်အိတ်ကို ဘုရားစင်အောက်ရွှေ့ထားလိုက်ရင်း ပြောလိုက်ရသော်လည်း….“မြညို“ကို မြင်ရတော့မည်ဆိုသောအခါ ရင်ထဲ“လှိုက်“ခနဲ ဖု တက်သွား၏။ဆရာ ရင်ခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“မဖဲရေ….မြညိုကို အပြင်ခဏခေါ်ခဲ့ပါကွယ်….စောင်ထူထူခြုံလာခဲ့နော်…..““ဟုတ်ကဲ့ အရီးလေး“ဆရာရွှေဒေါင်း ဘုရားစင်ပေါ်ရှိပန်းအိုးထဲမှ ဂမုန်းရွက်ပန်းအိုးတစ်အိုးကို သူ့ရှေ့သို့ယူချကာ ကိုင်တွယ်ပြုပြင်သလိုလုပ်သည်။ထိုအခိုက် မြညို တုံတုံရီရီလေး အပြင်သို့ မဖဲနှင့် အတူထွက်လာ၏။ မျက်နှာလေးနီရဲကာ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ တုံနေရှာ၏။ အဖျားကတော်တော်များဟန်တူသည်။ ထူထဲနက်မှောင်သော မျက်ခုံးတန်းလေးအောက်မှ မျက်ဝန်းညိုကြီးများက အဖျားဒဏ်ကြောင့် မှေးစင်းနေကြငြားလည်း အရည်လည်ကာ လဲ့ရွှန်းနေမြဲဖြစ်သည်။
ဖြောင့်စင်းသော နှာတံလေးအောက်မှ ပါးလွှာနီရဲသော အပေါ်နှုတ်ခမ်းနှင့်ထူအမ်းသောအောက်နှုတ်ခမ်းလေးက မျက်နှာ၏အထူးခြားဆုံး ဆွဲငင်အားကို ဖြစ်စေသောအရာပင်တည်း။ တော်တော်လှတဲ့ ဟာမလေး။“ထိုင်…..လာ….ဒီရှေ့တိုးပါအုန်း သမီးရဲ့““တိုးလေ မြညို….ဆရာက ပျောက်အောင်လုပ်ပေးမှာ“မခွေးမက သူ့သမီး မြညိုကို ရှေ့သို့တွန်းပို့ပေး၏။ဆရာရွှေဒေါင်းက ဘုရားစင်ပေါ်မှချထားသော ဂမုန်းပင်အရွက်ဖားဖားကြီးများကို လက်ဝဲလက်နှင့်ကိုင်ကာ မြညို ရှေ့သို့ချလိုက်သည်။
“ကိုင်း အထက်ဆရာကြီးများနှင့်တကွ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံးပါး ဦးထိပ်ထားလျက်“လူလိမ် လူညာတို့ မည်သည် တန်ဘိုးရှိသော ဘုရားတရားစကားကို ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျရွတ်ဆိုတတ်ကြပြီး တစ်ဖက်သား ဦးညွှတ်လာအောင်လဲ ပြောနိုင်စွမ်းရှိကြကြောင်း သပြေအိုင်ရွာသူ ရွာသားများ သိမထားကြ။ အထိတ်အခေါင် ဂါထာစကားများကို ရေပက် မ၀င်အောင်လုံးစေ့ပတ်စေ့ ရွတ်ဖတ်ရာ၌လည်း နားထဲသို့ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်းမသိပဲ..စီကာစဉ်ကာ ၀င်သွားလျင်ပဲ ချက်ချင်းမီးဟုန်းဟုန်း ထတောက်တော့မှာလိုပင် မြန်မာလူမျိုးတွေယုံပစ်လိုက်ကြသည်။
“ဇော်ဂနီ….ဇော်ဂနက်….မောက်လုံး….မောက်ပြား…စုန်းတစ္ဆေ….မြေဘုတ်ဘီလူး…မှင်စာသဘက်…“စုံနေစေ့နေအောင် ရွတ်ဆိုပြီး မြညို နဖူးမှစ၍ ရင် ၊ ရင်မှခါး၊ ခါးမှပေါင်၊ ပေါင်မှဂမုန်းပန်းအရွက်ဖားဖားကြီးတွေ အပေါ်ဆွဲကာ ဆရာရွှေဒေါင်းက လက်ယာလက်ဖြင့် သပ်ယူသည်။“ဟာ““ဟယ်““ဘုရား….ဘုရား ဂမုန်းရွက်ဖားဖားကြီးတွေ ကဆရာရွှေဒေါင်းဘက်သို့ အကုန်ဦးညွှတ်ကျလာကာ….တဆတ်ဆတ်တုန်ခါရင်း ဇက်ကျိုးလျက် တန့်နေကြသည်။ ဂမုန်းရွက်များတဆတ်ဆတ်တုန်နေသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆရာရွှေဒေါင်းဘက်သို့ဦးညွှတ်နေသည်ကိုလည်းကောင်း အားလုံးအထင်ကရ မြင်လိုက်ကြသောအခါ တုန်လှုပ်အံ့သြစွာ ဟင် ဟာ ဟယ် တွေဖြစ်ကုန်ကြလေသည်။ တကယ်တမ်းတွင် ဆရာရွှေဒေါင်းလိမ်ပြနေခြင်းဖြစ်၏။
ဂမုန်းပန်းအိုးကိုဘုရားစင်မှယူချစဉ်မှာပင်သေးငယ်သောပင်အပ်လေးများကိုအရွက်ဖျား များတွင် ထိုးစိုက်ထားခဲ့သည်။ လက်ယာလက်တွင် ၀တ်ဆင်ထား လက်စွပ်မှာ အားကောင်းသံလိုက်တုံးကို ဓာတ်လုံးသဖွယ် ကွင်းဝတ်ထားခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဆရာရွှေဒေါင်း လက်ဝါးလှုပ်ရှားရာဘက်သို့ လိုက်ပါလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်၏။ သံလိုက်စက်ကွင်း မိရုံခွာပြီး လက်ကိုတန့်ထားရင်လည်း ဂမုန်းရွက်ဖျားများ ညွှတ်ပြီးတန့်နေရခြင်းဖြစ်၏။
“အေး…အေး….သာဓု…သာဓု…ဆရာမှန်း သမားမှန်း သိတယ်ဆိုရင်ပဲ ခွင့်လွှတ်သကွဲ့၊ ခွင့်လွှတ်သကွဲ့…. ဟုတ်ပီ….ဟုတ်ပီ“ဂမုန်းရွက်များ ပြန်လည်ပတ်သွားကြ၏။“မခွေး…နင့်သမီးကုသိုလ်ပဲဟ…..ငါ့ကို သိုက်နန်းပုဂ္ဂိုလ်တွေက ရိုသေကြတယ်……….ငါ မေတ္တာရပ်ခံရင်တော့ ရတန်ကောင်းရဲ့ထင်တာပဲ“အပ်ပါတယ်……ဆရာရယ်…..အပ်ပါတယ်…..ကျွန်မသမီးလေး အသက်ချမ်းသာရာရအောင်သာ လုပ်ပေးပါရှင်“မခွေးမက တုန်တုန်ရီရီနှင့်လက်အုပ်လေးပင်ချီကာပြော၏။ အခုန သံသယ မျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်သော ရေချမ်းလဲ ကျုံ့ကျုံ့လေးမိန်းမထိုင် ထိုင်ကာ ထရံနားတွင် ဆရာ့ကို ရိုသေလေးစားစွာ ကြည့်နေရှာသည်။ “အင်း….စမ်းကြည့်သေးတာပေါ့လေ…..အိမ်း…ဒီအနီးအနားမှာ သံပုရာသီးဖြစ်ဖြစ် ရှောက်သီးဖြစ်ဖြစ် မရနိုင်ဘူးလားကွဲ့““ရှိတယ်…ရှိတယ်…ရေတွင်းနားက သံပုရာပင်သီးနေတာ ပြွတ်နေတာပဲ…ကျွန်တော်သွားခူးခဲ့မယ်“ရေချမ်းက လျင်မြန်စွာ အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွား၏။“သိုက်ကြိုးဖြတ်တယ်ဆိုတာ ငရဲကြီးတယ်ကွဲ့…..ကောင်းတော့မကောင်းဘူး“မကောင်းမှန်းသိလျက်နှင့်ပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေသော အထက်ဆရာကြီးရွှေဒေါင်းကို ၀ိုင်းအုံကြည့်ကာ အားလုံးငြိမ်သက်နေကြသည်။ ရေချမ်းသံပုရာသီး သုံးလေးလုံးကိုင်ပြီးတက်လာ၏။ ဆရာရွှေဒေါင်းက ပလပ်စတစ်အရိုးနှင့် နှစ်ဆယ့်လေးကျပ်တန် သူဌေးမီးဖိုချောင်သုံး ကြက်သွန်လှီးစတီးဓား အသေးလေးကို လွယ်အိတ်ထဲမှထုတ်၏။ ရေချမ်းလက်ထဲမှ ကမ်းပေးလာသောသံပုရာသီးများကိုယူပြီးဖျာပေါ်ပုံထားလိုက်ခါ၊“ကိုင်း…သိုက်နန်းရှင်မ မြညို ဟောဒီဓားနဲ့သံပုရာသီးကို ခွဲစမ်း သမီး…မကြောက်နဲ့ခွဲချ““မြညို ယူလိုက်လေ….ခွဲလိုက်“မြညိုက စတီးဓားလေးကိုယူကာ သံပုရာသီးတစ်လုံးကိုခွဲချလိုက်သည်။ နီရဲသော သွေးများဖြာဆင်းလာသည်။ “ဟယ်…သွေးတွေ ကျလာပြီ““ဟာ…. သွေးတွေ….သွေးတွေ“ဆရာရွှေဒေါင်းက အောင်မြင်စွာပြုံးလိုက်ပြီးနောက်…တစ်လုံးထပ်ပေးသည်။ မြညိုလက်တွေ သိသိသာသာကြီးတုန်နေ၏။ ဓားကိုင်ထားသော လက်ကခါနေသဖြင့် ဆရာရွှေဒေါင်းက အပေါ်မှအုပ်ကိုင်ပြီး သံပုရာသီးကိုခွဲလိုက်ပြန်၏။“အို….သွေးတွေပါပဲလား“ပရိသတ်ထဲမှ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာ ငြီးငြူသံကြီးက ဆရာရွှေဒေါင်းကို သြဘာပေးနေသလိုပင် ဆရာရွှေဒေါင်းကအ၀တ်စတစ်ခုကိုရေဆွတ်ခါ ဓားသွားကိုပွတ်တိုက်ပစ်သည်။ ပြောင်လက်ခြောက်သွေ့အောင် ပွတ်တိုက်ပြီးမှ….“ကိုင်း….ကိုင်း…ပရိသတ်ထဲမှ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်လောက် ဆရာ့ကိုကူညီပါကွယ်….ဒီအရှေ့ကို ခဏလေးထွက်ခဲ့ပါ“ငြိမ်သက်နေကြသည်။ တစ်ယောက်မှထွက်လာမည့်သူမရှိ။ “ဟဲ့.. ရေချမ်း“ဟု တစ်ယောက်က အော်သံကြားလိုက်ရစဉ် ရေချမ်းကမြညို အနားရောက်နေပေပြီ။“ဟုတ်ပီ….ရော့…ဒီဓားနဲ့ပဲ ကျန်တဲ့သံပုရာသီးတွေကို ခွဲကြည့်စမ်းကွယ်….သွေးတွေထွက်ရဲ့လားလို့“ရေချမ်းက မြညိုအတွက်ဆိုလျှင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်မည်ဆိုသော မျက်နှာဖြင့်မာန်တင်းကာ သံပုရာသီးတစ်လုံးကိုခွဲချလိုက်သည်။ “ဟင်….သွေးလည်းမထွက်ဘူး…““အေး….ဟဲ့“ဆရာရွှေဒေါင်းက ရေချမ်းပုခုံးကို ခပ်သာသာပုတ်ပြီး စတီးဓားလေးကိုယူပြီးသိမ်းလိုက်သည်။“မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲသမီးလေးမြညိုဟာ သိုက်နန်းကလာတဲ့သူဆိုတော့ ထူးခြားတယ် ဒါကြောင့် သူ့ကိုသိုက်ကြိုးဖြတ်ဖို့ ဆရာဆုံးဖြတ်ပြီး အသက်ကယ်ဖို့ တာဝန်ယူပါတယ်““သမီး….ခေါင်းအုံနေလား…..ခေါင်းကိုက်နေလား““ပျောက်သွားပြီ ဆရာ“မြညိုက ညှင်းသွဲ့သွဲ့လေသံလေးနှင့်ဖြေ၏။ လေးယောက်အိပ်ခြင်ထောင်ကြီးအတွင်း ဆရာရွှေဒေါင်းနှင့် သိုက်နန်းရှင်မလေး မြညိုပဲရှိနေ၏။ မခွေးမ အိမ်ပေါ်ဝယ် ရပ်ရွာထဲမှလူကြီးလူငယ်ဆယ်ယောက်ခန့်သာရှိသည်။ အိမ်ဝမှစ၍ ရာဇမတ်ကာလျက် စည်းတားထားသည်။ အိပ်ခန်းကို ပတ်ပတ်လည်ကာ၊ အထပ်ထပ်ကာထားသည်။ အုန်းပွဲ၊ ငှက်ပျောပွဲများနှင့် အမွှေးတိုင်နံ့တွေကမွှန်ထူကာ တစ်အိမ်လုံး လှိုင်နေရုံမျှမက ရွာလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်၌ပင် ပျံ့သင်းနေသည်။ နှင်းဆီ၊ စံပယ်အစရှိသော ပန်းကောင်းများရနံ့ကလည်း ရောထွေးနေ၏။“ခြေနှစ်ဖက်ဆင်းထား….ဟုတ်ပီ““ဒီဘက်လား…..ဟိုဘက်လား….ဆရာ““ခြေရင်းဘက်ပေါ့ သမီးရဲ့….အင်း…..အင်း…..“ ဖယောင်းတိုင် အတိုင်လေးဆယ်လောက်ထွန်းညှိထားသော အိပ်ခန်းလေးထဲ လင်းထိန်လျက်ရှိနေသည်။ မြညို ကိုယ်ပေါ်၌ ပဒုမ္မာရှံသား အင်္ကျီလေးတစ်ထည်ဝတ်ဆင်ထား၏။ ခြေဆင်းကာ စန့်စန့်ကြီးတန်းပေးထားသော မြညို၏ပေါင်သားကြီးများ လုံးတစ်နေ၏။“ဆရာပြောမယ်နော်….ဟုတ်ချင်..ဟုတ်တယ်….မဟုတ်ရင်….မဟုတ်ဘူးပြော…ကြားလား““ဟုတ်ကဲ့….ဆရာ““မရှက်ရဘူး…မကြောက်ရဘူး….ကြားရဲ့လား“နေ့ခင်းက သံပုရာသီးလှီးရာတွင် သွေးများချင်းချင်းရဲအောင်ကျဆင်းလာကတည်းက ဆရာ့ကို မြညိုကြောက်ရွံ့ ရိုသေနေမိပြီ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ ထိုစတီးဓါးလေး၌ ဖားပြုတ်ကျောကုန်းမှထွက်သော အစေးများကိုခြစ်ယူသုတ်လိမ်းထားကာ နေလှန်းထားမှန်းသိလျှင် မြညိုတစ်ယောက် ဆရာရွှေဒေါင်းကို နရင်းတီးချင်တီးမိပေမည်။ ဖားပြုတ်အစေးနှင့်အချဉ်ဓါတ်ထိတွေ့သောအခါသွေးသဖွယ်အနီရောင်ဓါတ်ပြုပစ္စည်းများ ကျဆင်းလားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ထိုအစေးများကို အ၀တ်နှင့်ပြောင်စင်အောင်သုတ်သင်ပြီး ရေချမ်းကိုသံပုရာသီးခွဲခိုင်းသောအခါ ဘာသွေးမှထွက်မလာခြင်း ပင်ဖြစ်ကြောင်း သပြေအိုင်ရွာသူ ရွာသားတွေ မသိရှာကြချေ။ ယခုတော့ မြညိုတစ်ယောက် ဆရာခိုင်းသည့်အတိုင်း ပေါင်တန်ကြီးတွေကို ဖားပေါင်စင်းကြီး စင်းကာ လက်နှစ်ဖက်ကို နောက်သို့ထောက်ထားရရှာလေသည်။ “မရှက်နဲ့နော်…….သမီး““ဟုတ်…..ဟုတ်ကဲ့ပါ…..ဆရာ…..“မြညိုတစ်ယောက် ရင်တွေခုံနေသည်။ နဖူးတွင် ချွေးလေးတွေစို့ချင်နေသည်။ ထောက်ထားသော လက်နှစ်ဖက် မသိမသာ တဆတ်ဆတ်တုန်နေရှာသည်။“သမီး စောက်မွှေးမပေါက်သေးဘူးမို့လား““ရှင်…..ဘာမွှေး….““ရှုး….တိုးတိုးပြောရတယ်…..အမွှေးအမွှေး စောက်မွှေး မပေါက်သေးဘူးမို့လား..လို့“မြညို ရှက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာ အံ့သြသည်။ ဒီဆရာ ဒီလောက်ကိုထိုးဖောက်သိနေပါလားဟုကြောက်၏။ “ဟုတ်ပါတယ်…..ဆရာ“မြညိုခေါင်းလေးကို ငုံ့ပစ်ရင်း ခပ်တိုးတိုးလေးပြော၏။“ဒါပေမယ့် လက်နှစ်ဆစ်လောက်ရှည်တဲ့ စောက်မွှေးတစ်ပင်တော့ရှိနေရမယ် ဟုတ်ရဲ့လား….“မြညို အသက်ရှုရပ်သွားမိမတတ် ခံစားရသည်။ သူမနှင့်နီးကပ်စွာ ဒူးထောက်ထားရင်း လက်နှစ်ဖက်ကို ပေါင်ပေါ်ထောက်ကာမျက်စေ့မှိတ်ပြီး တစ်လုံးချင်းပြောနေသော ဆရာ့စကားများက ကွက်တိမှန်နေ၏။“ဟုတ်….ဟုတ်….ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ““အိမ်း…အဲ့ဒါ သိုက်နန်းရှင် လက္ခဏာပဲကွဲ့“ဆရာရွှေဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပြန်သည်။ စောက်မွှေးမပေါက်တာ သိုက်နန်းရှင်လက္ခဏာဆို လျှင် သိုက်နန်းရှင်တွေ စောက်မွှေးမပေါက်ဟုသူက အတတ်သိနေသလိုလို။ “ကိုင်း…ကိုင်း…ဆရာ့ကိုလဲ ကိုယ့်မိဘလိုသဘောထား ဟုတ်လား….မရှက်ပါနဲ့ငါ့သမီး ဆရာက သမီးကို အမွှေးကူးပေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ငါ့သမီး အသက်ချမ်းသာရာရပြီမှတ်…….ကြားလား““ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာ“အမွှေးကူးသည်ဆိုသည်ကို ဘာမှန်းမသိပဲ မြညိုက တုန်တုန်ရီရီလေး ခေါင်းငြိမ့်လိုက်ရှာသည်။“ကဲ…….ငါ့သမီး……..ထမီလေးကိုချွတ်လိုက်တော့““မရှက်နဲ့……မရှက်နဲ့…..ချွတ်သာချွတ်““ရှင်……ထမီ““အေး…..ချွတ်လိုက်စမ်း….ငါအမိန့်ပေးနေတာ….ကလန်ကဆန်တော့မလုပ်နဲ့နော်…..နေ့လယ်ကဆေးဓားနဲ့ လည်ချောင်းသွေးဖောက်ပစ်လိုက်မှာနော်…..“ “ဟုတ်…..ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့“မြညို ကမန်းကတမ်းထမီလေးကို ချွတ်လိုက်သည်။ အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ဗလာကျင်းသွား၏။ ၀င်းဝါအိစက်သော ဆီးခုံကြီးက မောက်ကြွားခုံးထလျက် တင်းပြောင်နေသည်ကို ဆရာရွှေဒေါင်းတွေ့၏။ ဆရာရွှေဒေါင်း လိင်တန်ကြီးကမတ်ခနဲ တောင်လာသည်။“သမီး ပက်လက်အိပ်လိုက်စမ်း….ဘာမှမကြောက်နဲ့ကြားလား…ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မအော်ရ ဘူးနော်…..သမီးအော်လိုက်လို့စည်းပေါက်သွားရင် အားလုံး….မိစ္ဆာတွေ သရဲတွေ ၀င်လာကြမှာ““ဟုတ်….ဟုတ်ကဲ့….မအော်ပါဘူး ဆရာ“မြညိုက အိပ်ယာလေးပေါ် ပက်လက်လှန်ချလိုက်၏။ မြညိုဖင်ကြီးက ဘေးသို့ပြန့်ကားထွက်လာသည်။ “ဒီနေရာကို ဆရာက အမွှေးလေးတွေပေါက်လာအောင်လုပ်ပေးရမှာကွဲ့ ကြားလား“လက်တစ်ဖက် ဆီးခုံနုနုမွတ်မွတ်လေးကို မထိတထိလေးတိုးထောက်ပြလိုက်သောကြောင့် မြညို ဒူးနှစ်ဖက်ယောင်ပြီး ထောင်တက်သွား၏။“ခြေထောက်ဆန့်ထား““ဟုတ်…….ဟုတ်ကဲ့“မြညို ဒူးနှစ်ဖက်ပြန်ဆန့်ချလိုက်၏။ ဆရာရွှေဒေါင်း နှုတ်ခမ်းမွှေးကြားမှ ချွေးစေးများသီးစို့ထွက်နေသလို ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုံကာမောလှပ်လှပ်ကြီးဖြစ်နေသည်။ သူ့ပုဆိုးကိုခေါင်းမှကျော်ချွတ်လိုက်သည်။ ကိုင်းခရမ်းရှည်ကြီးပမာ မဲညစ်ကြီးထွားတုတ်ခိုင်နေသောလီးတန်ကြီးက ထောင်းကနဲကန်ထွက်လာသည်။ မြညို မျက်လုံးလေးများက ဆရာ့လီးတန်ကြီးကို မြင်ပြီး ပြူးကျယ်ဝိုင်းစက်သွားသည်။ “ဘာ……ဘာလုပ်…..မလို့လဲ……ဆရာ“ဆတ်ကနဲ ကိုယ်ကိုတစ်ဆစ်ချိုးထထိုင်ရင်း မြညိုက ထိတ်ထိတ်ပြာပြာလေး ပြောလိုက်သည်။ မျက်နှာလေးမှာလည်း နီရဲသွားသည်။“ဘာမှ မကြောက်ပါနဲ့ သမီးရယ်….ဟောဒီ ဆရာ့ရဲ့အမွှေးတွေကို သမီးဆီမှာပေါက်ဖို့အတွက်ကို ကူးပေးရမှာ ….ဒါမှ…အင်္ဂါစုံတဲ့ လူမိန်းကလေး အဖြစ်နဲ့ သိုက်နန်းကပြန်ခေါ်လို့မရတော့မှာ“ဆရာရွှေဒေါင်း အမှတ်တမဲ့လိုလိုဖြင့် မြညိုပုခုံးစွန်းလေးကို ပွတ်သပ်ပေးရင်းနှစ်သိမ့်လိုက်၏။ “သေချင်လဲ သေပါစေတော့ဆရာ….ကျွန်မ ဒီလိုတော့အကုမခံနိုင်ဘူး“ဆရာရွှေဒေါင်း ဒိန်းခနဲ ထူပူသွားသည်။ ခါးခါးသီးသီးလေးငြင်းဆန်ရင်း ထမီကိုပြန်ဝတ်ရန် လှမ်းဆွဲလိုက်သော လက်လေးကို ဆရာရွှေဒေါင်းကဖမ်းဆုတ်ပြီး သူ့လိင်တန်ကြီးအား ဆုပ်ကိုင်ထားစေပြီးမှ သူ့လက်ဖြင့်အုပ်ထားလိုက်သည်။ မြညိုက သူမလက်ကလေးကိုအတင်းရုတ်၏။ ပူနွေးမာတင်းသော အထိအတွေ့က လက်ဖ၀ါးမှတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သို့ စီးဝင်သွားသည်။“ဆရာပြောတာနားထောင်စမ်း…..မြညို..အခုလိုအခြေအနေရောက်မှ စည်းပေါက်သွားရင် အပြင်မှရှိတဲ့ မြညိုအမေပါ ….အစိမ်းသူရဲတွေ ၀ါးစားပစ်ကုန်မှာ အားလုံးဒုက္ခရောက်မှာ“ဆရာ့အသံက တုံတုံလှုပ်လှုပ်ကြီးနှင့် ဒရောသောပါးကြီးလည်းဖြစ်လာသည်။ လက်ကွင်းလေးထဲ၌ ဆုပ်မိထားသော လိင်တန်ကြီးအားမြညိုကအသိမဲ့စွာတစ်ချက်နှစ်ချက်ခန့်ညှစ်လိုက်မိ၏။ ထိုအခါ ဆရာရွှေဒေါင်းက အပေါ်မှအုပ်ကိုင်ထားသောသူ့လက်ကို ထက်အောက်လှုပ်ရှားပေးလိုက်ရာ လိင်တန်ထိပ်ကြီးမှာ ရဲကနဲ….ရဲကနဲ ပြဲသွား၏။“ဒါ……ဒါဖြင့်လဲ….မြန်မြန်လုပ်ပါတော့…..ဆရာရယ်““ကဲ….ကဲ….အိပ်…..အိပ်….ပေါင်နှစ်ဖက်ဖြဲထား….““ဖြဲထားရမယ်…..““အေးလေ ဒါမှ ဆရာ့အမွှေးတွေ သမီးရဲ့ဆီးခုံလေးပေါ်ကို ဖိကပ်လို့ရမှာပေါ့““သေသာ သေလိုက်ချင်တယ်“ဟု မြညို တိုးတိုးလေးဆို၏။ ဆရာရွှေဒေါင်းက မြညိုပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ၀င်ထိုင်ကာ ထူအမ်းသောစောက်ပတ်နှစ်ခြမ်းကြားသို့ တုတ်တုတ်ထွားထွားကြီးဖြစ်သော သူ့လီးကြီးကိုထိုးသွင်းလိုက်တော့၏။ “ ပြွတ်ခနဲ“ခပ်အစ်အစ်အသံလေးနှင့်အတူ မြညိုလက်နှစ်ဖက်က ဆရာ့လက်မောင်းကို ယောင်ပြီးဆုပ်ညှစ်လိုက်မိသည်။“န…..နာတယ်….ဆရာ….““ခဏ….လေးအောင့်ခံ သမီး….ခဏလေး….“မြညို အသိစိတ်တွေ လွင့်စင်ကုန်သည်။ ဖျင်းကနဲ ပူထူသွားကာ ငယ်ထိပ်မှခြေဖ၀ါးထိတိုင်အောင် လွှမ်းခြုံသွားသော ဝေဒနာကြီးကမြညိုကိုအာစေးထည့်လိုက်သလို၊ ညှို့တံကြီးနှင့်ထောက်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရ၏။ ဆရာရွှေဒေါင်း နဖူးပြင်ဝယ် ဇီးကင်းခန့်ချွေးသီးကြီးများ စို့ထွက်လာသည်။ ထောင်ထားသော မြညိုပေါင်တန်ကြီးနှစ်လုံးက အငြိမ်မနေ ပြဲလိုက် စုလိုက်ဖြင့် ဝေဒနာကိုခံစားနေရ ဟန်တူ၏။ “ပြစ်……ပလပ်….ပြစ်““အောင့်…..မလေး…အမေ…ကျွတ်ကျွတ်….“ ကျပ်ဝိုင်းလောက်ပင် မရှိသော မြညိုစောက်ပတ်အ၀လေးထဲသို့ ကြီးမားဖုထစ်သော လီးကြီးက အတင်းထိုးဝင်လိုက်သောအခါမျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့ပြီး ခေါင်းလေးကို ဘယ်ညာ…ခါရမ်းလျက် ခပ်အုပ်အုပ်လေးအော်လိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကမူ ဆရာရွှေဒေါင်း လက်မောင်းကို နေရာမရွေ့ပဲ အတင်းဆုပ်ကိုင်ထားဆဲပင်။ “ပြစ်….ပြစ်…. ပြွတ်““အိ…..အ….မရဘူး…..မရဘူး….မ၀င်ဘူး….အ“မြညို ဆရာရွှေဒေါင်းရင်ဘတ်ကြီးကို ထုရိုက်ပြီးတွန်းသည်။ ခြေဖနောင့်နှစ်ဖက်က ကြမ်းပြင်ကို ဒုံးခနဲ ဒုံးခနဲနေအောင်စောင့်ချလိုက်သည်။“အံမာ….အစိမ်းသရဲမက…..ငါ့ကို အာခံလို့…..ကဲကွာ….ကဲကွာ….ကဲကွာ…..““အောင်မလေး…..အောင်မလေးတော့…အမေရေ….““ဟိတ်…မဆိုင်သူ….စည်းဝိုင်းထဲ မ၀င်စေနဲ့ ဟေ့ …ဆရာရွှေဒေါင်းတဲ့ကွ…အင်..အင်“အပြင်မှ မခွေးမအပါအ၀င် အခြေအနေ နားထောင်နေသော လူများနားရွက်တွေထောင်လာကြ၏။ သတိထားနေသော ရေချမ်းကအိမ်လေးသိမ့်ခနဲ သိမ့်ခနဲ တုန်သွားသည်ကိုသတိထားလိုက်မိ၏။ “ကြမ်းပြီကွ…..ဥစ္စာစောင့်မနဲ့ ဆရာနဲ့ ချပြီ““ဟုတ်ပြီ…….ချကုန်ပြီ“လူငယ်တွေက ဆရာရွှေဒေါင်းမှာထားသည့်အတိုင်း ခြံဝမှစည်းတားထားသော ကန်တော့ပွဲကို လှမ်းကြည့်ကာ ဓါးကိုယ်စီအသင့်ပြင်ထားသည်။ ရေချမ်းကလည်း လက်ထဲတွင် ကိုင်ထားသော ငှက်ကြီးတောင်ဓါးကြီးအားပို၍ တင်းကြပ်လျက်ရှိနေသည်။“အပြင်က ဘယ်သူမှမလာစေနဲ့ဟေ့….အရေးကြီးနေပြီ ကြားကြရဲ့လား…““ဟုတ်ကဲ့…….ကြားပါတယ် ဆရာ“လူငယ်တွေက ပြိုင်တူအသံပြုလိုက်စဉ် အိမ်တစ်ခုလုံး သိမ့်ခနဲ သိမ့်ခနဲ ဆက်တိုက်တုန်သွား၏။ မခွေးမ မျက်နှာသည် ချွေးစေးတွေပြန်ကာ ဖြူရော်နေပြီး ပါးစပ်မှတတွတ်တွတ်နှင့်ဆုတောင်းနေ၏။ ဘကြီးသာဖန်က ရေချမ်းမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေရင်း အိမ်တုန်ခါပုံကိုစဉ်းစားနေသည်။ ငယ်ရာမှကြီးလာသော ဘကြီးသာဖန်က သည်လိုတုန်ခါမှုကို တတ်အပ်သိနေသလိုလိုခံစားရသည်။ စဉ်းစားနေစဉ်မှာပင် သိမ့်ခနဲ သိမ့်ခနဲနှစ်ချက်ဆက်တိုက်တုန်သွားပြန်သည်။ “အ….အု…..အု….အင့်…..အင့်……“ခပ်အုပ်အုပ် ပါးစပ်ကိုအ၀တ်နှင့်ဆို့ထားရာမှထွက်လာသောအသံမျိုးဟုထင်နေသည်။ ဒီဆရာ ဘယ်လိုများကုနေလဲဟု စဉ်းစား၏။ဆရာရွှေဒေါင်းကတော့ အပျိုမှေးလေးနှင့်ထိုးထောက်မိနေသော သူ့လီးကြီးကိုအတွင်းသို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်အောင် ကြုံးလိုက်ပြန်၏။“ပြွတ်….ဖောက် “အိုး…..အိုး…..ကျွတ်….ကျွတ်“အခက်အခဲဆုံး အပျိုမှေးအတားအဆီးကို ကျော်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုသည်နှင့် နာကျင်သောဝေဒနာများ လျပ်တပြက်ပျောက်ကင်း သွားသည်။ အီဆိမ့်အောင့်သက်သော ဝေဒနာနှစ်ရပ်ပေါင်းကာ စောက်ခေါင်းထဲတွင်ထူးခြားသောအရသာကို မြညိုခံစားလိုက်ရလေသည်။
ဆရာရွှေဒေါင်းက လက်နှစ်လုံးချန် ကျန်နေသောလိင်တန်ကြီးကို အဆုံးထိဖိသွင်းရန် ငုံ့ကြည့်ရင်း နေရာပြင်ထိုင်ကာရှေ့တိုးလိုက်၏။မြညို၏ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က လက်သီးဆုတ်လေးတွေဆုတ်ခါ ဆရာရွှေဒေါင်း ရင်ဘတ်ကိုတွန်းထားဖြစ်သော်လည်း အားပျော့နေပြီ။ မျက်လုံးလေးအစုံကို မှေးစင်းထား၏။ သွားနှစ်ခုကြား ရှီး ရှ ၀ူးဆိုသော လေထွက်သံလေးများနှင့်အတူ ခေါင်းကို ဘယ်ညာခါရမ်းလျက် အောင့်ခံထားရဟန်ရှိလေသည်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်က မော်တော်ကားဘရိတ်နင်းသလို ဖိနင်းလိုက် ဖနောင့်လေးဖိခြေဖျားလေးကြွလိုက်ခြင်းဖြင့် မနားတမ်းလှုပ်ရှားနေသည်။
“ ပြွတ်…… ပြွတ်….ဘွတ်…ဘွတ်““အား…..အား….“အရင်းအထိဆောင့်လိုးသွင်းလိုက် ဆတ်ခနဲ ဒစ်ချန်ရုံဆွဲနှုတ်လိုက်သဖြင့် ခပ်သွက်သွက်လေးထိုးလိုက်သောအခါ စီးစီးပိုင်ပိုင်ဖြင့်လီးတန်ကြီးကိုစုပ်ထားသလို ညှစ်ထားသောစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများ လီးတန်ကြီးနှင့်အတူ လိပ်ဝင်သွားလိုက် လီးတန်ကြီးစူအထွက်၌အပြင်အထိကပ်ငြိပါလာကာရဲခနဲ ပြဲသွားလိုက်ဖြစ်နေသည်ကို မြင်နေရ၏။
“ဆရာ…..ဆရာ….အထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးဖြစ်လာပြီ……““အောင့်မထားနဲ့ ပန်းထုတ်ပလိုက်…..သမီး““အင့်….အင်း…..အင့်…..အင်း…..အင်း….အင်…အင်း….ရှုးကျွတ်““အား….အား….ဟူး…ဟူး….ကျွတ်….ကျွတ်…အမလေး နာလိုက်တာ ဆရာရယ်…..“အချိန်မဲ့ ရွာခဲ့သောမိုးနေ့က ဆရာရွှေဒေါင်း အသေအလဲဝါးချင်ခဲ့သော ကွမ်းတောင်ကိုင်မလေး မြညို၏စောက်ပတ်အထဲမှ သုတ်ရည်များ ဒလဟောပန်းဖြာထွက်လာသောအခါ ဆရာရွှေဒေါင်း လိင်တန်ကြီးထိပ်မှလည်း ပြင်းထန်သောအရှိန်ဖြင့် လရေများပန်းထည့်လိုက်ပေတော့သည်။ မြညိုက ပျော့ခွေနုံးချိစွာ လက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးသို့ဆန့်လျက် ပစ်ချပြစ်လိုက်မိလေသည်။ ဆရာရွှေဒေါင်းက မြညိုပါးလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးလေး နှုတ်ဆက်နမ်းလိုက်လေသည် အပြင်တွင် အစိမ်းသရဲများကို ငှက်ကြီးတောင်ဓါးများ၊ လှံများ၊ ၀ါးချွန်များနှင့် စောင့်နေကြသော ကာလသားများ မြညို၏ အသွေးအသားများကို မြိန်မြိန်ယှက်ယှက်ကြီး စားသောက်ဝါးမျိုသွားသော အစိမ်းသူရဲ ရွှေဒေါင်းအိမ်အနောက်ဖက်အပေါက်မှဆင်းသွားသည်ကိုမသိလိုက်ကြချေ။